जिबन शर्माको छोराको जिबन रक्षार्थ समाजसेवी ज्वाला संग्रौलाको सहयोग « Postpati – News For All
मङ्सिर १३, काठमान्डौ । जनगायक जिबन शर्माको छोराको उपचारका लागि जापानमा रहेकी लेखिका तथा समाजसेवी ज्वाला संग्रौलाको नेतृत्वमा संकलित रकम हस्तान्तरन भएको छ । आज लोक प्रिय संचारकर्मी रबि लामिछाने र नागरिक समाजका अध्यक्ष निगम हुमागाईको उपस्थितिमा नगत ६ लाख रकम जिबन शर्मालाई बुझाएको हो ।
समाजसेवामा सक्रीए रहेकी ज्वाला संग्रौलाको नेतृत्वमा रहेको अभियानलाई एचबी ताम्राकार, गिरजा गैरे, रबिन शर्मा र दिपा घिमिरेले साथ् दिएका थिए ।
त्यसैगरी बहराइनबाट कृष्ण थापाको नेतृत्वमापनि जिवन शर्माको छोराको जिवन रक्षाकालागि सहयोग रक़म पहिले नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । सहयोग गर्ने दाताहरुलाई जिवन शर्माले धन्यबाद दिएका छन् ।
अभियन्ता ज्वाला संग्रौलाको भाबुक संदेश
सहयोग हस्तान्तरण पछि जापानबाट अभियन्ता ज्वाला संग्रौलाले भाबुक संदेश दिएकि छन् । जनगायक जीबन शर्माको इमानदारिता र सदाचारिताको लामो इतिहाँसको मुल्यांकन गर्दै सहयोग गरेको बताएकी छिन ।
सहयोग गरेकोमा खुसी लागेको जनाउदै भनेकी छन्, ‘जनगायक जीबन शर्मा सर प्रतिको हाम्रो मुल्याङकन र नज़रिया पछाडि वहाँको इमानदारिता र सदाचारिताको लामो इतिहाँस छ। आज एकदमै खुसी लागेको छ कि वहाँजस्तो सादगी जिवन जिएर हिँड्ने योद्दालाई सानो अभियान मार्फत थोरै भएपनि सहयोह गर्ने अवसर हामी सबै नेपालीले पायौं।’
हेनुहोस उनको स्टाटस:
हामी कुनै बाद, पार्टी, संगठन, धर्म, पेशा , सम्पति , योग्यता र जातको आधारमा मान्छेको आलोचना या समर्थन गर्दैनौ, हामी त केबल उस्को नैतिक धरातल र उस्ले बोकेको चरित्रले समाजमा पारेको प्रभाव हेरेर उस्को मुल्याङकन गर्छौं!
जनगायक जीबन शर्मा सर प्रतिको हाम्रो मुल्याङकन र नज़रिया पछाडि वहाँको इमानदारिता र सदाचारिताको लामो इतिहाँस छ! आज एकदमै खुसी लागेको छ कि वहाँजस्तो सादगी जिवन जिएर हिँड्ने योद्दालाई सानो अभियान मार्फत थोरै भएपनि सहयोह गर्ने अवसर हामी सबै नेपालीले पायौं!
धेरै धेरै धन्यबाद हजुरहरु सबैलाई, जस्ले वहाँको सुपुत्रको सुस्वास्थ र दिर्घ जीबनको कामना गरेर सहयोग उपलब्ध गराईदिनु भयो र हजुरहरुको सहयोगमाथी कहिँ कतै खोट र चोट नलगाई हामीले जस्ताको तस्तै र बरु अझ बान्की मिलाएर वहाँसम्म पुर्याएका छौ!
रबि दाई र निगम दाई जस्तो इमानदार र देशभक्त छोराहरुको हातबाट यो सहयोग जीबन सरसम्म पुर्याएर आजबाट हामीले पनि एउटा ज़िम्मेवारी पुरा गरेका छौं। हामीलाई पैसाको मुठो देखाएर प्रचार प्रसार गर्नु भन्दा पनि हाम्रो उदेश्य, भावना र ज़िम्मेवारी के हो र त्यस्लाई हामीले बहन गर्न सक्यौं कि सकेनौं, त्यतातिर फ़ोकस गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ! यो कुनै नाम कमाउन गरिएको ब्यापार हैन,एक इमानदार योद्दाको पारिवारिक पीडामा दिइएको साथ हो, माया हो, सम्मान हो!फेरिपनि सबैजनालाई एकमुस्ट धन्यबाद ! जीबन सरको सुपुत्रलाईँ चाँडो निको होस् र आउँदो १७ तारिककको वहाँको अप्रेशन पनि सफल रहोस्..!